Australia oo lagu taageeray xardhid la’aanta sigaarka | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Australia oo lagu taageeray xardhid la’aanta sigaarka
Dalka Australia ayaa ku guulaystay muran wayn oo dhanka ganacsiga ah, kaas oo ku saabsanaa in aan waxba lagu xardhin baakadaha sigaarka, arrintaasna waxaa ku taageertay Hay’adda Ganacsiga Adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WTO.
Australia ayaa qasab ka dhigtay sannadkii 2011 in dhammaan sigaarka la iibinayo la galiyo baakado aan soojiidasho lahayn, laguna qoro digniino tilmaamaya caafimaad darrada uu horseedo.
Toddobo sano ka dibna Hay’adda Ganacsiga Adduunka ee WTO ayaa diiday cabasho ay arrintaas ka keeneen afar dal oo ku andacoonaya in meel looga dhacay qawaaniintii caalamiga ahaa ee ganacsida.
Waxaa la filayaa in go’aankaasi uu ku faafi doono dunida inteeda kale, inta laga helayo racfaan rasmi ah.
“Australia guul ayay gaartay” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ay dawladdu soo saartay Jamcahan.
Cuba, Honduras, Dominican Republic iyo Indonesia oo dhammaantood soo saara tubaakada ayaa ku dooday in baakadaha aan waxba lagu qoraynin ay meel ka dhac ku noqonayso astaamihii khaaska ahaa ee ganacsiga iyo xaquuqda hal abuurka sancada.
Laakiin hay’adda ganacsiga Adduunka ee WTO ayaa ku gacansayrtay doodahaas iyo sheegashooyinkaas, waxayna sheegtay in tallaabooyinka kale ee la qaaday laga heli karo faa’iidooyin dhanka caafimaadka dadwaynaha ah.